Mabhuku akanakisa emapurisa, akanyanya kusarudzwa | Zvazvino Zvinyorwa
Kutaura nezve akanakisa emabhuku ematsotsi kunosanganisira kuzvishongedza negirazi rinokudza uye kutonga kwakanaka uye kutsvagira mune imwe yeanonyanya kufarirwa mabhuku emhando dzanhasi. Nekudaro, iro mukurumbira iro rairi kuzvirumbidza nhasi rakanga risingafanire sezvaraive parakatanga. Uye hongu, isu tiri kutaura nezve maitiro anozvidzwa zvikuru nekushoropodzwa kwemanyorerwo mushure mekuonekwa kwawo (hafu yechipiri yezana ramakore rechiXNUMX). Nekudaro, kuzvidza kune avo "vanofunga vepamusoro" hakuna kupa dambudziko kune vanyori venyaya dzematsotsi.
Muchokwadi, vanyori Edgar Allan Poe - mutangiri mukuru werudzi-, Sir Arthur Conan Doyle naAgatha Christie vakatsanangurwa sevane hunyanzvi hwemabhuku epasirese. Pamwe chete neavo vataurwa, panoonekwa mazita akadai saDashiell Hammlett, Vázquez Montalbán kana John Verdon (pakati pevamwe), nemabasa anoonekwa seakakosha mukati merondedzero dzemapurisa.
1 Mhosva dzeMorgue Street (1841), naEdgar Allan Poe
1.1 Kutanga kwemhando yemapurisa
1.2 Kukosha kwaAuguste Dupin
1.3 Zvinyorwa zveMhosva dzeMorgue Street
2 Mhosva uye Kurangwa (1866)
3 Chidzidzo muScarlet (1887)
4 Iyo Maltese Falcon (1930)
5 Keteni: Poirot's yekupedzisira Nyaya (1975)
6 MaSouth Seas (1979)
7 Ini ndoziva zvauri kufunga (2010)
Mhosva dzemochari Street (1841), naEdgar Allan Poe
Mhosva dzemochari Street.
Unogona kutenga bhuku pano: Mhosva dzemochari Street
Kutanga kwemhando yemapurisa
Munyori weAmerica Edgar Allan Poe (1809 - 1849) aive shasha yechokwadi yetsamba, sezvo aiziva kuita piyona mune dzakasiyana zvinyorwa zvemhando. Imwe yemipiro yake yakakosheswa kumabhuku epasirese yaive hunhu hwake semutikitivha Auguste Dupin.. Chaizvoizvo, mu Mhosva dzemochari Street kekutanga kwekuonekwa kwake katatu kwakaitika.
Kukosha kwaAuguste Dupin
Iko kushanda kweDupin hakuna kuganhurirwa kumagwaro akasainwa naPoe, zvirokwazvo haina kuora. Zvakanaka, anotevera "kusafa" mutikitivha mumabhuku (Sherlock Holmes) akanyatso kufurirwa nemaitiro ake. Kufanana nehunhu Hercules Poirot kubva Christie Agatha. Holmes anotomutaurira iye chaiye munyaya dzake (kunyangwe semumwe munhu "akaderera" kwaari).
Zvinyorwa zve Mhosva dzemochari Street
Munyori asingazivikanwe ishamwari yepedyo yaDupin uye ndiye anonyanya kukosha mushure me protagonist. Iyo rongero inotarisana nekugadziriswa kwenyaya yekuponda kwevakadzi vaviri (amai nemwanasikana) mune zvisinganzwisisike mamiriro. Pamusoro pezvo, mapurisa anokwanisa kuunganidza mashoma ehungwaru uye kubvunzwa kwevavakidzani uye zvapupu zvinogoneka hazvipe data rinobatsira.
Zvakaipisisa, pakati pevaya vanofungidzirwa pane mumhan'ari ane mhosva ine kusahadzika zvakanyanya. Nekudaro - kufambiswa nenyaya dzega dzega - Knight Dupin anokumbira mvumo yekugadzirisa mhosva. Pane imwe nguva apihwa, protagonist anoshandisa huchenjeri hwake uye neminiti ruzivo kudzamara awana chinoshamisa chinokonzera kufa.
Mhosva uye Kurangwa (1866)
Mhosva uye Kurangwa.
Mumutambo uyu, munyori weRussia Fyodor Dostoyesvki (1821 - 1881) zvinehunyanzvi anosanganisa hunhu hwepfungwa nemaonero anopikisa evatambi vakuru. Kunyangwe isiri bhuku remapurisa mune rakasimba pfungwa yezwi, rinonyanya kukosha mukati meiyo genre. Nekuti inomiririra zviitiko kubva mundangariro yemutadzi.
Chokutanga, murondedzeri wezvese anoziva zviitiko kubva pakuona kwemunhu mukuru, Riodón Raskólnikov. Kunyanya, inotsanangura hupenyu hwemudzidzi uyu nematambudziko emari (kunyangwe achibatsirwa naamai vake nehanzvadzi). Gare gare, Raskólnilov - akapindirwa nekunyepedzera kwehukuru - anouya kuzoruramisa kuba uye kuponda kweakwereta wekare, Aliona Ivánova.
Gare gare, munyori anoratidza maonero evamwe vatambi vanobatanidzwa (mupurisa, hanzvadzi yake, muponesi wemhuri yake ...). Panguva yepamusoro, protagonist anozvipira kuzviremera, kunyangwe kana pasina humbowo hunomupomera.. Mukupedzisira, Riodón anozadzisa mutongo wake muSiberia uye akamirira kusangana naSonia, mudiwa wake.
Dzidza muScarlet (1887)
Unogona kutenga bhuku pano:
Sir Arthur Conan Doyle aiziva zvaaiita. Vhoriyamu yekutanga yaSherlock Holmes yakabvumidza vaverengi kuti vazive nemuongorori ane mukurumbira uye mumwe wake akavimbika, Dr. Watson.. Icho chiratidzo mukati merondedzero dzematsotsi nekuda kwekudzika kwemaitiro anotarisirwa muzvinyorwa zvaAuguste Dupin. Ndokunge, kufunga kwekubvisa, kutarisa kune ruzivo rwusina kuoneka pane izvi, kushandiswa kwesainzi nzira ...
Uye zvakare, Holmes inotonhora, isinganzwisisike, isina zororo zvakanyanya uye inonyanya kusavimbika (kunyange iine hunhu) nevakadzi. Vhura Dzidza muScarlet, mutikitivha weBritish ane makore makumi maviri nematanhatu kana makumi maviri nemanomwe ekuberekwa. Iyo rangano inotanga nemusangano wekutanga pakati paHolmes naDr Watson. Iyo yekupedzisira inokurudzira protagonist kuti aongorore kupondwa kwemurume akawanikwa mune isina vanhu imba.
Iyo Maltese Falcon (1930)
Iyo Maltese Falcon.
Unogona kutenga bhuku pano: Iyo Maltese Falcon
Yakanyorwa naDashiell Hammlett (1894 - 1961), Iyo Maltese Falcon Iyo inokosheswa nhasi seinongedzo isingazungunuke mukati meiyo American mhosva inoverengeka. Pane ino chiitiko, chiitiko chinoitika muSan Francisco. Ikoko, boka revatengesi vezvehunyanzvi (kunyanya) vari munzira yejewel rakaumbwa segora uye rakafukidzwa nematombo anokosha.
Iri zita raive rekutanga pamaviri akatarisa Sam Spade, mutikitivha ane hunhu hunhu uye akajaira kushandisa zvisingaenderane nzira. Nekudaro, Spade inonyatso kuumbiridza iyo mhando yemuongorori ane hunhu hunopokana, anokwanisa kukombama mirau uye kuita chero chinhu kugadzirisa mhosva. Izvo zvinosanganisira kusatendeseka uye kunyange zvakaipa zviito.
Curtain: kesi yekupedzisira yePoirot (1975)
Unogona kutenga bhuku pano: Keteni
Agatha Christie (1890 - 1975) akanyora bhuku iri pamusoro penyaya ichangoburwa yemutikitivha wake wemifananidzo Hercules Poirot makumi mana emakore asati aburitswa. Iyo rangano inoitika muStyles Court, imba inoshandurwa kuita hotera uko Poirot anosangana neshamwari yekare, Colonel Hastings. Kwaari mupfuri anozivisa kufungidzira kwake pamusoro pekuvapo kwe "munyoro" Mr. X, pakati pevaenzi.
Mr. X mhondi ine hutsinye yakabatana nemhondi shanu dzakapfuura, asi aive asati ambobatwa nekuti aisambofungirwa. Hutano hwaPoirot hunowedzerwa kugona kwemutadzi: anofamba newiricheya nekuda kweArthritis. Nechikonzero ichi, zvinoda rubatsiro rwakawandisa mumamiriro ekumanikidza.
Makungwa ekumaodzanyemba (1979)
Unogona kutenga bhuku pano: Makungwa ekumaodzanyemba
Iyi nhoroondo naManuel Vázquez Montalbán (1939 - 2003) Iri nderimwe remabhuku akakosha zvikuru akanyorwa muchiSpanish muzana ramakore rechimakumi maviri. Iyo nyaya yakaiswa muBarcelona, ​​inotarisa kumibvunzo ine chekuita nekupondwa kwaCarlos Stuart Pedrell. Ndiani, asati aonekwa akafa (akabayiwa) akatendwa kuti anga achifamba nemumakungwa ekumaodzanyemba kwegore.
Hunhu hunobata kujekesa chokwadi mutikitivha Pepe Carvalho (akapihwa basa nemukadzi wemushakabvu). Nekudaro, kana kuferefetwa kuchifambira mberi zvinova pachena kuti Pedrell haana kumbotanga rwendo rwake. Pakati pekukakavadzana kuri kutonga, zvinoita, chakanyanya kukosha ibhizimusi remushakabvu uye kuda kwake mupendi weFrance Post-Impressionist, Paul Gauguin.
Ndinoziva zvauri kufunga (2010)
Ndinoziva zvauri kufunga.
Unogona kutenga bhuku pano: Ndinoziva zvauri kufunga
Funga nezveNhamba (zita rekutanga reChirungu) raimiririra chiroto chakaburitsa kutanga kwemunyori weAmerica uye mutori venhau John Verdon. Kwete pasina, Iri bhuku rakakwira kusvika kunhamba yekutanga pane iyo Nyeredzi uye Stripes Nyika's inonyanya kutengesa runyorwa. Iyi nganonyorwa inotarisa mutikitivha Dave Gurney ndeimwe yenyaya dzakakurumbira mumhando dzevapurisa ezana ramakore rechiXNUMX.
Chirevo chakadai chakakodzera - kunze kwenhamba dzayo dzekutengesa - nekuda kwechirongwa chinoshamisa kwazvo, chine simba uye chinodhakwa. Pamwe (hongu) nekunetseka kuoma kweavo mavara. Nezve, Verdon akataura kuti akavaka protagonist yake pasi pesimba rakakura reanofarira literati: Sir Arthur Conan Doyle, Reginald Hill naRoss McDonald.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Mabhuku akanakisa emapurisa
Ndakave nekunakidzwa Mhosva dzeMorgue Street neCrime uye Kurangwa. Yokutanga yakanaka, asi yechipiri ini handioni ichienderana nemhando yematsotsi.